May 6, 2021 299
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) गरिरहेको काममा त्यती मन नलाग्नाने सामान्य अप्जस आईपर्ने छ । ब्यापार ब्यबसायमा राम्रो समय रहेको छ । खानपा`नको कारणले स्वास्थ सम्बन्धि समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । मनोरञ्ज`नका क्षेत्रमा समय ब्यति|त रहला । अना`वश्क कार्यका निम्ति बढि समय ब्यतित हुन सक्छ । कार्य क्षेत्रमा सोचे अनुरुप समय दिन सकिने छैन ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) मान्य जनको साथ सहयोग द्वारा कार्यको क्षेत्रमा जोश जागर बढ्नेछ । बिद्या प्राप्ति को योग रहेको छ । पारीवा`रिक झमेला ले सताउनेछ । सहि समयमा सहि निर्णय गर्न नसक्ना`ले सामान्य झन्झट देखा पर्नेछ । सामुहिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ । नयाँ कामको थालनिले दीर्घका`लीन फाईदा हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) अनावश्यक खर्चको योग रहेको छ । दाजूभा`ई तथा ईष्ट मित्र बिच सामान्य मनमुटाब रहन सक्छ । कामको क्षेत्रबाट सामान्य अपजस वा झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । धार्मिक यात्राको योग रहेको छ । प्रतिस्पर्धीहरुको बृद्धि हुनाले खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ । यात्रामा सामान्य झन्जट आउन सक्छ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) खानपानको गढ्रबढीले स्वास्थ क्षेत्रमा साधारण समस्या देखा पर्नेछ । प्रतिस्पर्धीहरुको बृद्धि हुनाले खुट्टा तान्ने ब्य|क्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ । अनावश्यक कार्यका निम्ति बढि समय ब्यतित हुन सक्छ । गैर विश्वासनिय ब्यक्तिको भर पर्नाले सामान्य झन्झटको सामना गर्नु पर्नेछ । बोलिको कारण साथि भाई टाढिन सक्छन ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आम्दानि क्षेत्र सबल रहेता पनि स्बास्थमा सामान्य बाधा आईपर्ने छ । जिवन साथिको सहयोगमा ब्यापार ब्यबसा`यका क्षेत्रमा रामा्रे समय रहनेछ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ । नयाँ कामको थाल`निले दीर्घकालीन फाईदा हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । सामुहिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) दाम्पत्य शुखमा कमि आउन सक्छ । आटँ र शाहसमा बृद्यि हुने योग रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा भने दिन मध्य`म रहनेछ । कार्य क्षे|त्रमा सोचे अनुरुप समय दिन सकिने छैन । सामु`हिक कार्यमा सहभागी हुने अबसर रहेकोछ । बोल्दा होश पुर्याउनु होला । मेहेनत अनु`रुपको फल प्राप्त हुनाले कार्य क्षेत्रमा जागर बढ्नेछ ।
तुला राशि (रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) मित्र जनको सहयोग बाट गरीएको कार्यमा सफलता प्राप्त हुनाले मन प्रशन्न रहला । नयाँ कामको थालनिले दीर्घकालीन फाईदा हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । बोलिको का`रण साथि भाई टाढिन सक्छन । बिद्या प्राप्ति को योग रहेको छ ।सहि समयमा सहि निर्णय गर्न नसक्नाले सा`मान्य झन्झट देखा पर्नेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) पारीवारीक साथ सहयोग बाट गरीएका कार्यमा बिशेष सफलता प्राप्त हुनेछ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्त हुनाले कार्य क्षेत्रमा जागर बढ्नेछ । खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दि|नुहोला । ब्यापार ब्यबसाय|मा राम्रो समय रहेको छ । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) मित्रजनकोे साथ सहयोगमा गरीएका कार्य द्वारा भाग्योदयको सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउन सक्छ । या`त्रामा सामान्य झन्जट आउन सक्छ । आटँ र शाहसमा बृद्यि हुने योग रहेको छ । दाजूभाई तथा ईष्ट मित्र बिच सा|मान्य मनमुटाब रहन सक्छ । देश बिदेशको यात्राको सम्भावना रहेकोछ ।
मीन राशि (दी, दु, थ, झ,ञ, दे, दो, च, ची) भोग`विलासका क्षेत्रमा समय ब्यति`त रहने योग रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । सामान्य आर्थीक अभावको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । देश बिदेश`को यात्राको सम्भाव`ना रहेकोछ । प्रतिस्प`र्धीहरुको बृद्धि हुनाले खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्नेछ । यात्रामा सामान्य झन्जट आउन सक्छ ।
Prevसुनको मूल्य घट्यो, नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य कति छ ? हेर्नु`होस्
Nextआज नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो की घट्यो ? हेर्नुहोस्
आज जेठ १० गते शनिबारको राशिफल हेर्नुहोस्……
‘फेसबुकमा माया बसेको प्रेमिको एउटा खुट्टा छैन भन्ने थाहा पाएपछी झन माया लाग्यो’ (भिडियो सहित)
खोलाले बगाएर बेप`त्ता भएका अधिकारी मृता`वस्थामा फेला